Madaxweyne Gaas iyo Guddoomiyaha Baarlamaanka oo Sacuudiga u Dhoofay (dhegayso) – Radio Daljir
Agoosto 17, 2017 6:39 g 0
Madaxweynaha Puntland, Cabduweli Maxamed Cali Gaas, ayaa Maanta ka dhoofay garoonka diyaaradaha Bander Qaasim ee Boosaaso isaga oo ku sii jeeda dalka Sacuudiga. Madaxweynaha ayaa sheegay in uu sanndkan uu kamid yahay dadka Soomaaliyeed ee gudanaya waajibaadka xajka.
Madaxweynaha ayaan ka hadlin warmurtiyeedkii dhawaan ka soobaxay ee ku aadanaa taageerada xuluufada sacuudiga iyo ku boorinta DFS in ay xulada la socoto. Madaxweynaha ay horay dowladda Sacuudiga uga helay ballanqaadyo caawino iyo dhismaha kaabayaal dhaqaale oo muhiim u ah horumarka Puntland.
Safarka Madaxweynaha waxaa ku weheliyay Guddoomiyaha Baarlamaanka iyo marwadiisa.
Siyaasadda & Dhaqaalaha 501 Wararka 25997
Warka Fiidnimo iyo Cabdixakiim Xuseen, Daljir Garoowe (dhegayso)